The First Burmese Migrants’ invasion from China, to colonize and settle in Pagan မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Read all here @ The First Burmese Migrants’ invasion from China, to colonize and settle in Pagan (in Burmese)
မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း
မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း ရေးသူ- ဒေါက်တာသန်းထွန်း
အရှေ့တောင်အာရှ မြို့နိုင်ငံတွေကို ဝင်ရောက်လုယက် ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ နန်ကျောင်စစ်တပ်ကြီးမှာ မန်းမန်တွေ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရစ် ၈၃၂ နဲ့ ၈၃၅ အတွင်း လုယက်ဖျက်ဆီးတယ်။ မန်းမန် တပ်သားတွေဟာ သတ္တိရှိတယ်။ သစ္စာရှိတယ်လို့ ဂုဏ်သတင်းကြီးတယ်။ မန်းမန် တပ်သားတယောက်ကို ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပဲ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပေမယ့် စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ လိျှု့ဝှက်ချက်တွေကို မေးမရပါ။အဲဒီ လူတွေဟာ စစ်တိုက်ခိုက်တာကို အစကပဲ နှစ်သက်သူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် နန်ကျောင်ခိုင်းသလို အကြာကြီး လှည့်လည် လုယက်တိုက်ခိုက်နေလို့ မဖြစ်နိုင်လို့ သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ် ၉ရာစုနှစ် လယ်က စပြီး နန်ကျောင်အုပ်စိုးတဲ့ ပြည်နယ်ထဲက ထွက်ခွါလာခဲ့တယ်။ အရှေ့တောင် အာရှတခွင် နေရာအများကို ရောက်ဖူးပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံ မြေပြန့်ဒေသတွေကိုသာ သူတို့ရဲ့ အိုးအိမ်သစ် ထူထောင်ဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာလို့ ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ပူအိုက် စွတ်စိုပြီး ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ သေတတ်တဲ့ ရပ်ရွာဒေသကို ကြောက်လို့ ပူအိုက်ခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနယ်မြေကို သိတဲ့အပြင် ရှိရင်းစွဲလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုလည်း သိလို့ သူတို့ဝင်လာတာကို မခုခံမဲ့ လမ်းက ဝင်တယ်။ သံလွင်မြစ်ကို စုန်ဆင်းပြီး မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကျော် အရှေ့တောင်ထောင့်က ဖြတ်ဝင်တယ်။ အဲဒီနောက် စားသုံးရန် ကောက်ပဲသီးနှံ အများဆုံးထွက်တဲ့ ကျောက်ဆည်နဲ့ မင်းဘူးဒေသတွေကို သိမ်းယူတယ်။ မြောက်ဘက်မှာ မန္တလေးဝန်းကျင်၊ တောင်ဘက်မှာ မိချောင်းရဲဝန်းကျင်တွေမှာ အစောင့်တပ် ချထားတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ ဝင်ရောက်လာတာဟာ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်နယ်သိမ်းယူလိုက်တဲ့ သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။ မွန်၊ ကဒူး၊ ပျူ၊ သက်၊ ပေါင်လောင်း နဲ့ စကြောလူမျိုးတွေ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အလယ်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းရာမှာ လွယ်ကူပါတယ်။ နိုင်ငံသစ်ရဲ့ ဗဟိုအရပ်ကို ပုဂံဟု သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ခရစ် ၉ ရာစုနှစ် အလယ်မှာ မြန်မာတွေက မြန်မာရဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့အရပ်မှာ အခြေချပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
ခြောက်သွေ့အရပ်မှာ နေဖို့ ဆုံးဖြတ်တာဟာ မိုးများတာကို မကြိုက်လို့ ဖြစ်တယ်။ ပျူ၊ ပေါင်လောင်နဲ့ မွန်တွေကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်း နိုင်ပါတယ်။ မကြာခင် ရှိရင်းစွဲ လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံတွေကို မြန်မာတွေ နှစ်သက် သုံးစွဲလာတဲ့အတွက် အောင်နိုင်သူတွေ ကျဆုံးပြီလို့ ပြောဆိုတာ ခံရပါတယ်။ စစ်လိုလားသူ တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်တဲ့ တောင်သူဘဝကို ကူးပြောင်းလာပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာမှာလည်း သက်ဝင်ယုံကြည် လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပင်ကိုယ်သဘောဖြစ်တဲ့ စစ်အလေ့အကျင့် မပျောက်ဘဲ အရေးရှိရင် ရှိတဲ့အတိုင်း လူမြန်မြန် စုပြီး လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ မြေကတုတ်နဲ့ စစ်ဆင်တိုက်နည်းကို အထူးကျွမ်းကျင် တယ်။
ကျောက်ဆည်နဲ့ မင်းဘူး အရပ်ဒေသတွေမှာ ရှိရင်စွဲ မွန်နဲ့ ပေါင်လောင်လူမျိုးတွေဆီက ဆည်ရေသောက် စပါးစိုက်နည်းကို ခပ်မြန်မြန် သင်ယူတတ်မြောက်ပြီးတော့ သူတို့လည်း တောင်သူ လယ်သမားတွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ မကြာခင် တောရိုင်းတွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာကို ဆည်မြောင်းတွေနဲ့ ရေသွင်းပြီး ယပ်တောင်ဖြန့်လိုက်သလို ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနဲ့ တောင်တွင်းဒေသတွေမှာ လယ်စိုက် ကြတယ်။ မြေသြဇာညံ့တဲ့ အရပ်တွေမှာ ထန်းဥယျာဉ်၊ ကွမ်းသီး ဥယျာဉ်တွေကို စိုက်တယ်။ တနှစ်မှာ တကြိမ် မြစ်ရေလျှံတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပဲမျိုးစုံ စိုက်တယ်။ မြေညံ့လွန်းရင် ပြောင်းနဲ့ နှမ်းစိုက်တယ်။ စိုက်ပျိုးရာမှာ အလေအလွင့် မရှိအောင် မြေကို အသေးစိတ် အသုံးချတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိုက်ပျိုးတဲ့ မြေဧရိယာကို တတ်နိုင်သလောက် ကျယ်ပြန့်စေဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးကို သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန်းခြောက်ဒေသ တခုလုံး ကောက်ပဲသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းလာတာဟာ အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ အောင်မြင်မှုတရပ် ဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့ မြန်မာတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားတွေ အဲဒီလို အစွမ်းထက်ပါတယ်လို့ ဂုဏ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုရာမှာ ကိုယ့်မိသားစု တနှစ် ဝမ်းစာရရုံလောက် စိုက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေခွင့်ရလာတဲ့အခါ မြန်မာလူဦးရေဟာ အလျင်အမြန် တိုးတက်လာတယ်။ ဒီတော့ စိုက်ခင်းနယ်မြေကို မချဲ့မဖြစ် ချဲ့ရပါတယ်။ အုပ်စိုးတဲ့ နယ်မြေကိုလည်း တိုးချဲ့နိုင်တယ်။ အရင်းမူလပြုတဲ့ ဒေသအပြင် တိုးလာတဲ့ ဒေသကို ပေါင်းစပ်လို့ ခရစ် ၁၁ ရာစုနှစ် အလယ်က စပြီး နိုင်ငံဟု ထင်ရှား ပေါ်ပေါက်ပြီး နိုင်ငံထူထောင်ရာမှာ ပထမဆုံး ထင်ရှားတဲ့ မင်းဟာ အနိရုဒ္ဓ ခေါ် အနော်ရထာမင်းစော ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆည်ရေသောက် လယ်စိုက်တာကို မွန်တို့က စတယ်လို့ သိရတယ်။ မြန်မာတို့က ဆည်ရေသောက် လယ်စနစ်ကို အလျင်အမြန် နည်းယူတတ်မြောက်ပြီး မြန်မာ့အလယ်ပိုင်း လွင်ပြင်အနှံ့ မြို့ရွာ တည်ထောင်ကာ ဆည်ရေသောက် လယ်တွေ တိုးချဲ့ခဲ့တယ်။ အပြင်းအထန် ကြိုးစားနိုင်လို့လည်း ခန်းခြောက်ဒေသနယ် တခုလုံးနီးနီး ကောက်ပဲသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းလာတာ ဖြစ်တယ်။ ၁၁ ရာစုနှစ်မှာ နောက်ထပ် နယ်ချဲ့ နိုင်တဲ့အခါ မြန်မာနယ်ဟာ မြောက်ဘက်ကို ဗန်းမော်အထိ၊ တောင်ဘက်ကို ဘိတ် အထိ ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ အဲဒီအခါက ပင်လယ်ရပ်ခြား ရောင်းဝယ်မှုမှာ အချက်အချာဖြစ်တဲ့ စလင် အငူကိုပါ ခေတ္တခဏ သိမ်းယူနိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလူ တောင်ဘက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်လို့ ခရစ် ၁၁၆၅ မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ စစ်မက်ဖြစ်ပွါးခဲ့ရပါတယ်။
[မုံရွေးစာအုပ်တိုက်ထုတ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ မြန်မာသမိုင်းပုံ စာအုပ်၊ ပထမအကြိမ်၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၄မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။]
ဦးဉာဏိဿရ ပြောတဲ့ ဧည့်သည် မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဆရာတော်ပြောသွားတဲ့ ဧည့်သည်တွေအကြောင်း နည်းနည်း ပြောကြည့်မယ်။ ၈-ရာစု၊ ၉-ရာစု လောက်က သမိုင်းကြောင်း တချို့ကို မပြောသေးဘူး။ လောလောဆယ် ကျနော့်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်က စာမျက်နှာကိုပဲ အရင်ကြည့်ဦးမယ်။ ဒီစာမျက်နှာက ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးတဲ့ `မြန်မာ့သမိုင်း မြေပုံများ´ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး စာမျက်နှာပါ။ (၁၇) ရာစုဆိုတာ ၁၆၀၀ ကျော်နှစ်များကို ဆိုလိုတယ်လို့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဝင်လာတာ (၁၉) ရာစု .. ။ဦးဉာဏိဿရ ပြောတဲ့ ဧည့်သည်
ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ က ဒီလိုပြောသွားတာကို voice weekly မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
.. “တို့မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောက်တာနှစ်၂၀၀၀ရှိပြီ။ ခရစ်ယာန်တွေ၊ အစ္စလာမ်တွေ ရောက်လာတာက အင်္ဂလိပ်ဝင်မှ ရောက်လာတာ။ အဲဒီနောက်မှ ရောက်လာတာ ဆိုတော့ နှစ်တစ်ထောင်မပြောနဲ့ တစ်ရာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက အိမ်ရှင်နိုင်ငံပါ။ အဲဒီလို Invade လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ Migrate လုပ်ပြီးတော့ ဝင်ရောက် လာကြတဲ့ လူတွေက ဧည့်သည်တွေ။” …..READ ALL HERE @
ဦးဉာဏိဿရ ပြောတဲ့ ဧည့်သည် မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း
6 Responses to “The First Burmese Migrants’ invasion from China, to colonize and settle in Pagan မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း”
December 15, 2015 at 6:08 am | Reply
ပ်ဴသား ပ်ဴေျမးက ပ်ဴမျဖစ္ဘဲ ဗမာျဖစ္လာတာကုိ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ဖတ္ေနပါတယ္၊ ကုိမုိးသီး။
က်ေနာ္အေသအခ်ာ ယုံၾကည္တာက သမုိင္းကုိ ဘယ္သူကမွ ျပင္လို႔ ေျပာင္းလုိ႔၊ လိမ္လို႔ ညာလုိ႔ မရဘူး။ လူမ်ိဳးတုိင္းက သမုိင္းကုိ အရွိအတုိင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လက္ခံၾကရပါမယ္။ မိမိတုိ႔၏ ႏွလုံးသားတံခါးနဲ႔ အသိညာဏ္တံခါးကို အစဥ္ဖြင့္ထားရမယ္။ ပိတ္ထားလုိ႔ မရဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။
ကုိယ့္ဘုိးေဘးက ကုလားျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ကုလားမဟုတ္ဘူးေျပာလုိ႔ မရသလုိ၊ တရုတ္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္လည္း တရုတ္မျဖစ္ဘူး ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ သီးျခားလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆုိရင္လည္း ကုလားနဲ႔ တရုတ္က အေနသာႀကီးပါ။
သမုိင္းက ဘက္မလုိက္ဘူး။ ခ်စ္သူ မုန္းသူ မရွိဘူး။ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ဆုိတာကုိ သမုိင္းက မသိဘူး။ သမုိင္းက အခ်က္အလက္ဘဲ သိတယ္။ သမုိင္းမွာ အခ်က္အလက္ဘဲ ရွိတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တာက ႏွစ္ခုဘဲ။
သမုိင္းက သခၤန္းစာယူသင့္တာကုိ သခၤန္းစာယူျခင္းနဲ႔ အတုယူသင့္တာကုိ အတုယူျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
အေရးအႀကီးဆုံးက သမုိင္းသခၤန္းစာနဲ႔ သမုိင္းအတုယူစရာေတြကို လက္ရွိလူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိအသုံးခ် က်င့္သုံးႏုိင္ၾကမလဲဆုိတာသာ ျဖစ္တယ္။
December7at 7:35pm ·
ဒီစာကို ေရးရတဲ့ အေၾကာင္းက ဒီလိုပါ။ ၂ဝ၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ထုတ္ ဆဲဗမ္းေဒးသတင္းစာအြန္လုိင္းမွာ ေဆာင္းပါး ရွင္ ခ်မ္းၿငိမ္းရဲ့ “ႏွစ္တရာမက ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္အၿပီးမွာ ပ်ဴနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမွန္အတုိင္း သိၾကေစဖို႔ ဆႏၵရိွလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္တရာျပည့္ အထူးေဆာင္းပါးပါ။
December 15, 2015 at 6:10 am | Reply
Read my article in Wikipedia about Pyu city-states@ https://en.wikipedia.org/wiki/Pyu_city-states
Read my article in Wikipedia about Migration period of ancient Burma @ https://en.wikipedia.org/wiki/Migration_period_of_ancient_Burma
The origins of the “Myanma”.
Many people have asked about this, and I thought I would post on what I know.
First of all, it’s important to remember that ethnicity is an ever changing thing. What it means to be “American” or “Indian” or “German” today is different from 100 or 200 years ago. What is means to be “Myanmar” today may be completely different than in the past.
Also, it’s important to remember that the history ofalanguage (e.g. Burmese or Myanmar) is not the same as genetic history. People speaking Burmese today may or may not be genetically close to their linguistic cousins.
That said, I think this is what we know:
1. A great civilisation existed at Sanxingdui in what is today Sichuan approximately 3,000 years ago. We still know very little about this civilisation. It was distinct from the Yellow River civilisations to the north-west that gave rise to the earliest Chinese dynasties. There is reason to believe that this civilisation included speakers of languages ancestral to the “Tibeto-Burman” languages of today (including Myanmar). The Chinese Qin dynasty annexed this area in 316 BC.
2. Two significant kingdoms existed in what is today Yunnan and Guizhou approximately 2,000 years ago: Dian and Yelang. It is very probable that the rulers of both spoke “Tibeto-Burman” languages including the ancestral language of Burmese (Myanmar).
3. Dian wasagreat bronze-age civilisation. The photograph is ofacowrie-shell container that was buried withaDian ruler. On top isahorseman. The hairstyle isahairstyle that has been adopted by many Tibeto-Burman speaking peoples, including in Yunnan and in today’s Myanmar.
4. The Dian people would have had close ties with people and places in the Irrawaddy valley, including early bronze-age settlements that gave rise to the “Pyu” cities.
5. Burmese isaTibeto-Burman language. It isapart of the Burmese-Yi subfamily. It’s closest linguistic relative is “Yi” (formerly known as “Lolo”). I believe the Dian rulers spokealanguage ancestral to both Burmese and Yi. Yi is spoken today by about5million people in China.
6. The Dian kingdom gave way in the 600s to the Nanzhao. The Nanzhao createdavery large empire from their base in western Yunnan. The Nanzhao conquered part of the Irrawaddy valley in the 800s. I believe the Nanzhao rulers spokealanguage similar to modern Burmese and Yi. The Nanzhao wereamajor power between Tibet and Tang dynasty China.
7. The period of Nanzhao domination of the Irrawaddy valley was the period that gave rise to the “Myanma” ethnic identity. Very possibly, the “Myanma” identity arose fromarelationship between the Nanzhao and the peoples already living in the Irrawaddy valley (e.g. the “Pyu”).
8. Yunnan under both the Dian and Nanzhao were famous for its horses and its horsemanship.
9. The word “Myanma” (spelled “Mranma”) first appears in inscriptions in the 11th century. It is possiblyavariation of the word “Mrang-ma” or “Myin-ma”. The “Mranma” people were thus the people of the “strong horses” or the “strong horsemen”.
10. This does not necessarily mean that there wasabig influx of people from Yunnan to the Irrawaddy valley in Nanzhao times, but rather that the Burmese-Yi language was adopted byagrowing number of people centred at the new power base – Pagan/Bagan.
11. Very interestingly, the earliest Bagan kings (Pyusawhti, Htiyinmin, Yinminpaik, etc) – all used the Nanzhao naming system, whereby the last name of the father becomes the first name of the son. For example, the Nanzhao kings were named Piluoge, Geluofeng, Fengjiayi, etc.). Bagan may have grown up asaNanzhao outpost.
12. One of the great annual festivals in Yunnan today is the Torch festival. I believe this goes back to Nanzhao times. In one variation, it centres on the myth ofavery strong brother and his beautiful sister, who were tricked by an evil king; the brother was burned alive, the sister jumped into the flames and died as well. This is of course almost identical to the Burmese myth of the Mahagiri nats.
13. Nanzhao declined in the 10th century, just as Bagan rose up. Nanzhao’s successor state was the kingdom of Dali. Dali wasaBuddhist kingdom, it’s capital was already called “Mithila” (Meikhtila). It’s Buddhism wasaform of esoteric Buddhism (known in the Irrawaddy valley by memories of the “Ari” monks). Dali was annexed by the Mongols in the 13th century. Yunnan was part of China from then on.
14. The ancestral “Myanma” or “Mranma” may thus have been horse-riding immigrants from Nanzhao/Yunnan who first entered the country in the 9th century. They may have been descended from people who were part of the earlier Dian and Yelang kingdoms, and even further back the great bronze age civilisation of Sanxingdui.
15. This doesn’t mean that the “Myanmar” or “Bamar” of today are descendants of these people, except in part. People in Myanmar today (including the “Bamar”) are geneticallyamix of peoples, including the Austroasiatic peoples and other Tibeto-Burman peoples who were already living in the Irrawaddy valley.
16. Future genetic testing may tell us much more.
(Photo of Dian kingdom cowrie-shell container with horseman 3rd century BC. Maps of Dian era and Nanzhao era Asia.)
December 8, 2019 at 8:41 am | Reply